Shirkii golaha wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay qodobo muhiim ah. – Radio Daljir
Luulyo 21, 2016 12:19 g 0
Muqdisho, 21 July 2016—Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa manta yeeshay kulankoodii khamiislaha ahaa, waxaana shir gudoomiyay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Maxame Cumar Carte, shirka ayaa looga hadlay arrimo ay kamid yihiin qorshaha amniga doorashooyinka, iyo heshiisyada Soomaaliya iyo shirkadaha shidaalka.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka mudane Axmed Cali Daahir oo shirka ka soo qeeybgalay ayaa sheegay in hey’adaha sharciga ay soo diyaarinayaan ka hortaga danbiyada ay ku kici karaan dadka sida musuq-maasuqa, laaluushska iyo ku tagri-falka awoodeed inta lagu guda jiro doorashooyinka.
Ugu dambeyntii Golaha wasiirda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray dadkii lagu laayay tuulada War-diile ee gobolka Baay, waxeeyna u magacaabeen gudi ka kooban Wasaaradaha gaashaandhiga, arrimaha gudaha, iyo amniga gudaha si ay iyagoo kaashanayo maamulka koonfur-galbeed ay warbixin sugan ugu soo gudbiyaan Xukuumada Soomaaliya.
DHEGEYSO-Ciidanka Puntland oo gobolka Bari kawada howlgalo Tahriibka kadhan ah.